डण्डीफोरपछि छालामा किन दाग बस्छ? उपचार के? (भिडियो) :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डण्डीफोरपछि छालामा किन दाग बस्छ? उपचार के? (भिडियो)
कमला गुरुङ शनिबार, चैत १९, २०७८, ०७:००:००
काठमाडौं - डण्डीफोर धेरै व्यक्तिको आम समस्या हो। धेरैजसो डण्डीफोर आएर निको भएपछि छालामा दाग बस्ने गर्छ। केही दागहरु आफैँ निको भएर जान्छन्। तर समयमा उपचार नगरे छालाका ती दागहरुले कडा रुप लिन्छन्।
डण्डीफोर भनेको के हो? डण्डीफोर आइसकेपछि किन दाग बस्छ? उपचार के छन्? लगायत विषयमा हामीले वीर अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट छाला रोग विशेषज्ञ डा लैला लामा ताङबेतानीसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
डण्डीफोर भनेको के हो?
– डण्डीफोर भनेको छालामा आउने एक किसिमको समस्या हो। यो किशोर अवस्थामा बढी आउँछ।
– डण्डीफोर रोग भन्दा पनि व्यक्तिको छालाको प्रकारमा भर पर्छ।
– डण्डीफोर व्यक्तिको खानपान, जीवनशैली र सरसफाईमा पनि निर्भर गर्छ।
– अनुहारमा अत्यधिक तेल आइरहेको छ। र, त्यसलाई राम्रोसँग सफा गरिएन भने पनि डण्डीफोर आउँछ।
– चिसोमा भन्दा गर्मी मौसममा डण्डीफोरको समस्याले बढी सताउँछ।
डण्डीफोर आइसकेपछि छालामा किन दाग बस्छ?
– दाग बस्ने/नबस्ने डण्डीफोर र व्यक्तिको छाला अनुसार पनि हुन्छ।
– मसिनो खालको डण्डीफोरले छालामा दाग बस्दैन।
– तर कडा खालको, मित्रदेखि नै डल्लो भएर आएको डण्डीफोरले छालामा दाग छाड्छ।
डण्डीफोरलाई हातले चलाउँदा दाग झन् कडा हुन्छ?
– छालालाई डण्डीफोरले कति असर गरेको छ भन्नेमा पनि दागको गहिराई फरक पर्छ।
– डण्डीफोर आएको बेला चलाउने, निचोर्ने गर्दा छालामा चोट लाग्छ।
– डण्डीफोरले असर गरिरहेको बेला चलाउने निचार्ने गर्दा भएको चोटले दागलाई झन् कडा बनाउन मद्दत गर्दछ।
कुन अवस्थामा चिकित्सकको परामर्शमा जाने?
– कहिलेकाहीँ आउने, महिनावारी भएको बेला आउने, एक दुई वटा आउने डण्डीफोरमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन।
– छालालाई बिगारेको छैन। हेर्दा समस्याजनक देखिएको छैन भनेपनि उपचारको आवश्यक पर्दैन।
– डण्डीफोर पाकेर छालालाई बिगारेको छ, दुखेको छ, व्यक्तिलाई असहज बनाएको छ भने उपचारमा जानुपर्छ।
– राम्रो देखिनका लागि पनि उपचार गरिन्छ भने यसले निम्त्याउने असहजताका लागि पनि उपचार गर्नु आवश्यक छ।
डण्डीफोरले बनाउने दाग हटाउन के–के उपचार छन्?
– दैनिक छालाको सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ।
– छालामा कस्तो क्रिम तथा उत्पादनहरु प्रयोग गरिएको छ। त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
– आइसकेको डण्डीफोरलाई घरेलु उपचार वा क्लिन्जिङले संभव हुँदैन।
– डण्डीफोरले निम्त्याएको दागलाई हटाउन मेडिकल उपचार नै गर्नुपर्छ।
– खाने औषधि, लगाउने मल्हमदेखि विभिन्न उपचारहरु छन्। व्यक्तिले आफ्नो समस्या अनुसार उपचार गर्न सक्छन्।
दागलाई हटाउन कतिपयले घरेलु उपायहरु अपनाउँछन्। यो कत्तिको ठिक हो?
– छालामा कडा खालको दाग भइसकेको छ भने घरेलु उपायले सम्भव हुँदैन।
– कतिपय व्यक्तिले नबुझेर विभिन्न सामग्री लगाउँदा छालालाई झनै असर गर्न सक्छ।
– आफ्नो छालाको प्रकार बुझेर चिकित्सकको परामर्श अनुसार छालाको हेरचाह गर्नु नै ठिक हुन्छ।
डण्डीफोर आउनुमा खानेकुराको भूमिका के हुन्छ?
– छालामा आउने डण्डीफोरमा खानेकुराको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
– धेरै गुलियो, डेरी उत्पादक, कार्बोहाइडेटयुक्त खानेकुराले पनि डण्डीफोर आउनमा मद्दत गर्दछ।
– विशेषगरी डेरी लगायतको खानेकुरालाई कम सेवन गर्न हामी सुझाव दिन्छौ।
अनुहारको दाग हटाउन लेजरको भूमिका के हुन्छ?
– एक्टिभ डण्डीफोरका लागि हामी सामान्यतया लेजरको प्रयोग गर्दैनौ।
– डण्डीफोर निको भइसकेपछि त्यसले बनाएको दाग हटाउन लेजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
– व्यक्तिको छाला, दागको गहिराई अनुसार लेजर गर्न सकिन्छ।